Trump oo laga dalbaday inuu caddeeyo doorkii uu M Bin Salmaan ku lahaa dilka Khashoqji - BBC News Somali
Trump oo laga dalbaday inuu caddeeyo doorkii uu M Bin Salmaan ku lahaa dilka Khashoqji
Image caption Maxamed bin Salmaan oo salaamaya Donald Trump
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la weydiistay inuu mowqif cad ka istaago kiiska dilkii loo geystay Jamaal Khaashuqji, uuna muujiyo kaalinta uu Amiir Maxamed Bin Salmaan ku lahaa dhacdadaas.
Guddiga xiriirka caalamiga ah ee aqalka sare oo ka kooban xildhibaanno iskudhaf ah oo kasoo kala jeeda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraaddiga ayaa warqad ay Talaadadii u direen aqalka cad waxay ku codsadeen in baaritaan horleh la sameeyo.
Mr Trump ayaa goor sii horreysay si weyn u difaacay xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Sucuudiga, iyadoo ay jirto dhaleeceyn ku saabsan dhacdadaas oo Sucuudiga uga imaaneysa beesha caalamka.
Jamaal Khaashuqji ayaa 2-dii bishii Oktoobar lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Istambul, ee dalka Turkiga.
Trump oon dhagaysan doonin cajalka laga duubay dilka Jamal Khashoqji
Boqor Salmaan oo hadlay balse ka gaabsaday dilka Khaashuqji
Bayaan uu Trump soo saaray shalay oo Talaado ahayd ayuu ku sheegay in Maxamed Bin Salmaan uu dabcan ka warhayo dilkaas arxan darrada ah, ayna dhici karto inuu ku lug lahaa iyo inuusan ku lug lahayn labadaba.
Dhinaca kalena wuxuu ku adkeystay in xiriirka Mareykanka iyo Sucuudiga uu sii wanaagsanaan doono haddii Amiirka uu dilkaas gacan ka geystay iyo haddii kaleba.
Hase yeeshee, aqalka Senete-ka ayaa hadda doonaya in uu madaxweynaha cadaadis ku saaro sidii uu meel sax ah ugu tiirin lahaa dhacdadaasi.
Waxay ka codsadeen Mr Trump inuu diiradda saaro sidii loo sameyn lahaa baaritaan kale oo lagu xaqiijiyo in Amiir Maxamed Bin Salmaan uu mas'uul ka ahaa dilka aan maxkamadda loo marin, jirdilka iyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha.
Dalabkan oo la waafajiyay xeerka isla xisaabtanka la xiriira xuquuqda aadanaha ayey Senete-ku u qabteen in looga soo jawaabo muddo 120 casho ah.
Dowladda Sucuudiga ayaa dilkii Jamalaa Khaashuqji u aaneysay saraakiil ay sheegtay iney amar la'aan ficilkaas ku dhaqaaqeen, waxayna meesha ka saartay in Maxamed Bin Salmaan uu wax ka ogaa dhacdadaas.
Warbaahinta Mareykanka ayaa dhawaan shaacisay in waaxda sirdoonka dalkaas ee CIA-da ay aaminsantahay in Maxamed Bin Salmaan uu bixiyay amarkii lagu khaarajiyay Jamaal Khaashuqji.
Tan iyo markii la waayay Khaashuqji 2-dii bishii Oktoobar, waxaa soo baxayay warar is khilaafsan oo ku saabsanaa sidii uu u dhacay dilkiisa, inkastoo ugu dambeyn xukuumadda Riyaad ay qiratay in uu gacantooda ku baxay.
Khaashuqji ayaa ahaa wariye caan ah oo dhaliili jiray xukuumadda Sucuudiga, wuxuuna ku noolaa dalka Mareykanka.